हरप्रहर संवाददाता बुधबार, फाल्गुण २६, २०७७
काठमाडौँ – पिसाब फेर्न निस्किएका मान्य बालुवाटारभित्रै हराए । खोज्नेहरु शौचालय नै पुगे, तर मान्यचाहिँ ३ नं. गेटबाट फुत्त बाहिरिएको दृश्य सिसिटिभी फुटेजमा भेटियो ।
आइतबार बोलाइएको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकको दुई दिनअघि, अर्थात् शुक्रबार बालुवाटारमा देखिएको दृश्य हो यो । त्यसदिन त्यहाँ ओलीपक्षीय संसदीय दलको बैठक थियो । पहिला नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से हलमा बस्ने भनिएको उक्त बैठकमा पर्याप्त सांसद नपुग्दा बालुवाटार सारिएको थियो । शुरु हुँदा हलभित्र ६१ सांसद थिए । सकिँदा ५९ मात्रै भए । दुई भाइ बैठक चल्दाचल्दै गायव भए ।
एकजना पिसाब फेर्ने निहुँमा, अर्का जरुरी फोन आयो भन्दै बाहिर निस्किने बहानामा । ‘पिसाब फेरेर आउँछु’ भन्ने मुगुका सांसद गोपाल बम शौचालय नै पुगेनन्, ३ नं. गेटबाट निस्किए । उनलाई लिन कर्णालीका केही नेता राष्ट्र बैंकअगाडि गाडीमा पुगेका थिए ।
‘पिसाब’ लागेपछि हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले मोबाइलमा बजिरहेको घण्टी शुरुमा काटे । तर, बजेको बज्यै गरेपछि ‘हलो–हलो’ भन्दै हलबाट निस्किए । अनि, फर्किएर गएनन् । यी दुबैलाई लिनका लागि नेकपाको एनजिओ फाँटका सहइञ्चार्ज प्रल्हाद गौतमसहित पूर्वमाओवादीको टोली बालुवाटार पुगेको थियो । जनआस्था साप्ताहिकबाट